အယ်ဖိုး: ကီးလော့ဂျာ Software
ပြတာပါ။ဘာရည်ရွယ်ချက်မှတော့မထားပါဘူး။ကီးလော့ဂျာ ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲက ကိုယ်ကွန်ပြူတာမှာ ဘယ်သူဘာတွေ ၀င်နှိပ်သွားလဲဆိုတာက အစ၊ စခရင်ရှော့ အနေနဲ.ကော ၊ ဘာ Password တွေနဲ. ၀င်သွားတာက အဆုံး အကုန်လုံးကို ပြန်ကြည့်လို.ရတယ်ဗျ။ အင်တာနတ်က ရှာပြီးဒေါင်းလော့ဆွဲရင် Full Version မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က ခရပ်ဖိုင်ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီဟာကိုသုံးပြီး သူများ အီးမေးလ် Password တွေတော့မခိုးနဲ.ပေါ့ဗျာ။ နို.မိုဆိုရင်ကို ” ဆော့ဝဲကြောင့် ကျွန်တော်တို. Cyber Cafe မှာ Password အခိုးခံရမှဆိုးလို. ဘယ်သူမှလာမသုံးကြတော့ဘူး” Cyber Cafe တွေက ကျွန်တော်ကိုလာပြောနေကြပါဦးမယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ကီးလော့ဂျာ ဆိုတဲ.အတိုင်းပဲ သူက Spy ware တမျိုးပဲလေ။ ဒါကြောင့်မို. Antivirus ကို သူကိုဒေါင်းလော့ဆွဲတာနဲ. Delete လုပ်ပြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို. ကီးလော့ဂျာကို သုံးချင်ရင် Anitvirus ကို ခဏလောက် Exit လုပ်ထားပေးဖို.လိုပါလိမ့်မယ်။ Antivirus ကိုအရင် Exit လုပ်၊ ပြီးရင် ကီးလော့ဂျာကို ဒေါင်းလော့ဆွဲ၊ ပြီးရင် ကီးလော့ဂျာကို Run ပါ။ Run ပြီးသွားရင်တော့ Antivirus ကို ပြန် Run လို.ရပါပြီ။
ကီးလော့ဂျာ ကို Download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ password လေးကိုပေးပြီး run လိုက်ပါ။ပြီးတာနဲ့ Shift+h ဆိုရင် hide ထားတာပါ။ Shift+s ဆိုရင် ပြန်ဖော်ထားတာပါ။ hide ထားရင် run လို့run ထားမှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျ…ဒါလေးကိုဒေါင်းပြီးတော့ရှောက်မလုပ်ကြပါနဲ့နော်........
Posted by Peace at 3:40 PM